Gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa sheegay in saraakiisha iskuulka Iowa ee doorta inay waajib ku | KWIT
Tilmaamaha gobolka ee la sii daayay usbuucii hore ee dib loo furay Iskuulada K-ilaa-12 ee Iowa ayaa sheegay in daboolida wajiga la ogolaan karo, laakiin ma noqon doonto amar guud oo gobolka oo dhan ah. Tilmaamaha cusub ee la soo dhejiyay ee Waaxda Waxbarashada Iowa waxay leeyihiin liis tixgelinno ah oo ku saabsan waji xidhka. Intii lagu gudajiray shir jaraaid subaxnimadi maanta, gudoomiyuhu wuxuu yiri iskuuladu waa iney qeexaan adeegsiga haboon.
New York, New Jersey iyo Connecticut ayaa ku daray Iowa liiska gobolada ay ka kooban yihiin latalin u baahan dadka socotada ah inay is-karantiiliyaan 14 maalmood markay yimaadaan.
Gov. Andrew Cuomo iyo qeybihiisa counter New Jersey iyo Connecticut, waxay ku dhawaaqeen talo bixin safar safar usbuucii hore kaas oo u baahan shakhsiyaadka ka socda dowladaha 'kororka COVID-19' ee karantiil.
Taladu waxay khusaysaa dawladaha leh qiyaasta tijaabada togan oo ka sarreysa 10 100,000 oo deggane, ama heerka heerka imtixaanka oo ka sareeya 10%.
Xawaaladda Cuomo ayaa maanta ku dhawaaqday in Iowa ay hadda la kulmayso cabbirro hoos yimaada la-talinta safarka. Sidoo kale hoos imaadka lagu dhawaaqayo Talaadada waa California, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada iyo Tennessee.
Gov. Kim Reynolds wuxuu yidhi Iowa wuxuu badalayaa habka loo tiriyo kii kasoo kabsaday COVID-19. Gobolka ayaa hadda muujinaya dad badan oo ka soo kabanaya fayraska.
Laga bilaabo Isniinta, gobolka ayaa bilaabay inuu ka fiirsado Iowans inay ka soo kabato COVID-19 28 maalmood kadib baaritaanka togan, ama labo xilli cudur oo cudurka 'coronavirus' ah, haddii gobolka uusan helin macluumaad ah in qofkaas wali isbitaalka la dhigin ama uusan kasoo kaban.
Isbedelka kahor, Iowa wuxuu lahaa soo kabashada qiyaastii 62%, ayuu yiri Reynolds. Hawsha cusub waxay keenaysaa heerka soo kabashada Iowa ilaa 80%. Taasi waa qiyaastii boqolkiiba kiisaska sababa astaamaha khafiifka ah oo qofka cudurka qabaa uu ku bogsan karo guriga.
Shan qof oo kale oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintey Iowa, waxaana jiray 213 xaaladood oo dheeri ah oo la xaqiijiyay, gobolka ayaa soo wariyay maanta.
Gobolka ayaa soo tebinayey 712 dhimashada la xiriirta COVID-19, oo ah shan koror tan iyo maalintii gobolka shalay, sida lagu sheegay bogga internetka ee Coronavirus.Iowa.gov.
Maanta waxaa jira 28,941 xaaladood oo la xaqiijiyey oo ah COVID-19, oo ah 213 kordhay tan iyo shalay.
Lix kiis oo dheeri ah oo fayraska ah ayaa laga diiwaangaliyay Gobolka Woodbury maanta. Waxaa jiray 43 dhimasho oo loo aaneynayo COVID-19.
Wadahadalkooda maalinlaha ah ee la sii daayay, MercyOne Siouxland Medical Center iyo UnityPoint Health - St. Luke ayaa sheegay inay daryeelayaan 23 bukaan oo isugu jira cudurada la xiriira COVID-19.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in, berri oo wax ku ool ah, isbitaallada aysan mar dambe soo sheegi doonin tirakoobkooda maalinlaha ah ee COVID-19.
Nebraska waxay leedahay in kabadan 19,000 oo xaaladood oo ah coronavirus iyo269 dhimasho. Gobolka ayaa lahaa 243 kiis oo dheeri ah maanta.
Degane kale oo ka tirsan Gobolka Dakota ayaa u dhintey cudurka 'coronavirus' ee novel cusub.
Waaxda Caafimaadka ee Dakota County ayaa ku dhawaaqday dhimashada Northeast Nebraska ee 35-aad ee COVID-19 laxiriirta shalay, ay weheliso 14 xaaladood oo cusub oo fayras ah. Wadarta kiiska Dakota County hada waa 1,761,
South Dakota maanta waxay leedahay 6,716 xaaladood oo ah coronavirus, oo ay kujiraan 35 kiis oo dheeri ah maanta.